लकडाउनमा तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी ६ खानेकुरा – Taja Khawar
लकडाउनमा तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी ६ खानेकुरा
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: ०:३१:१५
यसबारे हामीले केहि जानकारी प्रस्तुत गरेका छाैँ ।
यदि तपाई वजनसंगै पेटको बोसो घटाउन चाहनुहुन्छ भने बिहान खाली पेटमा पानीको साथ कांचो लसुनको एक पोटी खानुहोस् । यतिमात्र नभइ, यदि तपाई उमालिएको पानीमा लसुनसंग कागतीको रस पिउनुहुन्छ भने तपाईले दुई गुणा छिटो तौल घटाउन सक्नुहुनेछ । लसुनको दैनिक सेवनले मेटाबोलिजम र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ । नारी म्यागजीनको सहयोगमा
Last Updated on: July 12th, 2021 at 12:31 am